Lesona 9 : Ireo andro ahaverezana
Inona no nitranga rehefa nihinana ilay hazo voarara i Adama sy i Eva? Niaina ny fatiantoka voalohany izy ireo, dia ny fahaverezana ny tsy fananany tsiny. Ary ny fitiavan-tena, fifandirana, fifanomezan-tsiny, ary faniriana hifehy sy hanjakazaka amin'ny hafa no nisolo io tsy fananan-tsiny io.
Fotoana fohy taorian'ny nanotany, dia nanatri-maso ny fahaverezan'aina voalohany i Adama sy Eva, rehefa namono biby Andriamanitra. Nampiasainy ny hoditr'ilay biby hanaovana fitafiana ho azy mivady mba hanaronana ny fitanjahany. Tsy navelan'Andriamanitra hihinana ny hazon'aina intsony izy ireo fandrao ho velona mandrakizay raha hihinana izany. Verin'izy ireo koa ilay saha tonga lafatra fonenany. Taona maro taty aoriana koa dia veriny ny zanany lahy, Abela, rehefa novonoin'ny rahalahiny, Kaina, izy. Tena nalahelo izy ireo noho izany. Nony farany, taorian'ny taona maro niainana, dia namoy ny vadiny ny may tamin'izy ireo. Tsy milaza ny Baiboly raha i Adama na i Eva no maty voalohany. Ary tamin'ny tena farany dia namoy ny ainy koa ilay vady mbola tavela. Jereo ny fahaverezana vokatry ny safidy diso iray monja.
Fantatsika rehetra tokoa ny fisian'ny fahaverezan-javatra sy ny ratram-po aterak'izany. Ary ny ankamaroantsika dia mahatsapa izany amin'ny tena mangidy indrindra rehefa midona amin'ny ankohonantsika izany fahaverezan-javatra izany.
Amin'ity herinandro ity dia hotohizantsika hatrany ny fandinihana ny fiainan'ny ankohonana, ka hijery ireo fotoana samihafa isian'ny fahaverezana ao amin'ny ankohonana isika.